दशैंका लागि प्रतिव्यक्तिले २७ हजारसम्म नयाँ नोट साट्न पाउने, कहाँ–कहाँ साटिन्छ नोट ? (भिडियोसहित) « News24 : Premium News Channel
दशैंका लागि प्रतिव्यक्तिले २७ हजारसम्म नयाँ नोट साट्न पाउने, कहाँ–कहाँ साटिन्छ नोट ? (भिडियोसहित)
काठमाडौं । विगतमा जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले दसैं लक्षित गरेर आजबाट नयाँ नोट साट्न थालेको छ । सर्वसाधारणको सहजताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यालय तथा सरकारी स्वामित्वका नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकका शाखा कार्यालयबाट समेत नयाँ नोट साट्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले विगतमा जस्तै उपत्यकाभित्र र बाहिर नयाँ नोट साट्ने व्यवस्था मिलाएको हो । पोहोर झैं यस वर्ष पनि केन्द्रीय बैंकले ५, १०, २० र ५० दरका दुई–दुई र १०० दरका एक बण्डल गरी प्रतिव्यक्ति अधिकतम २७ हजार रुपैयाँसम्म साटिदिने छ । त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रका सहकारी संस्थालाई तीन र सहरी क्षेत्रकालाई दुई लाख नयाँ नोट उपलब्ध गराइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने राष्ट्र बैंकले ११ असोजदेखि नै नयाँ नोट वितरण गरिसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पहिले नयाँ नोट दिएपनि ती संस्थाले समेत आइतबारदेखि मात्रै वितरण सुरु गरेका छन् । सरकारी स्वामित्वका बाहेक नोट कोष सुविधा लिएका वित्तिय संस्थाले पनि नयाँ नोट सटही गर्नेछन् । नोट सटही सुविधा २९ असोजसम्म हुने छ । नयाँ नोट साट्न प्रायः सबै केन्द्रमा सर्वसाधारणको घुँइचो लागेको छ ।
कहाँ–कहाँ साटिन्छ नोट ?
– काठमाडौं उपत्यकाभित्र नेपाल बैंकको न्युरोड, कीर्तिपुर, महाराजगन्ज, पाटन औद्योगिक क्षेत्र, लाजिम्पाट र भक्तपुर शाखाबाट नयाँ नोट सटही गर्न सकिने छ ।
– राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सिंहदरबार, टेकु, नयाँ बानेश्वर, सानो थिमी, विशालबजार, नक्साल, कलंकी र बालाजु शाखाबाट पनि नोट साटिने छ ।
– कृषि विकास बैंकको गौशाला, कोटेश्वर, रामशाहपथ, रत्नपार्क, स्वयम्भू र मंगलबजार शाखाबाट नोट वितरण भइरहेको छ ।
– मोफसलमा राष्ट्र बैंकका विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, पोखरा, सिद्धार्थनगर, नेपालगन्ज र धनगढीस्थित क्षेत्रीय कार्यालयबाट तथा राष्ट्र बैंकबाट नोट कोष सुविधा लिएका सरकारी स्वामित्वका बैंकको शाखाबाट नयाँ नोट साट्न सकिने छ ।
राष्ट्र बैंकले नोट जलाउने, केरमेट गर्ने तथा काम नलाग्ने बनाउनु गैर–कानूनी रहेको र त्यसो गरे ३ महिनासम्म जेल सजाय हुनसक्ने भन्दै प्रयोगमा सचेत हुन आग्रह पनि गरेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीले नै करिब ३० प्रतिशत नोटमा केरमेट गर्ने गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले उनीहरुलाई पनि क्रमशः कारबाहीको दायरामा ल्याइने जनाएको छ । दसैंमा सबैभन्दा बढी २०, ५० र १०० दरका नोट प्रयोगमा आउँछन् ।